Dhul Gariir ka dhacey Borama – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dhul Gariir ka dhacey Borama
Dhul Gariir ka dhacey Borama
Cabaaro 5:30 subaxnimo ee saaka dhul gariir aan wax khasaara oo ilaa hadda lasheegay geysan ayaa ka dhacay magaaladda Borama ee Gobolka Awdal .
Dhulgariirkan oo xadiga daqiiqadaha uu socday lagu qiyaasay 5 ilaa 8 daqiiqo ayaa labadii sano ilaa sadexdii sanaba hal mar ka dhaca magaaladaasi , taasoo sababtay in dadka magaaladaasi ku dhaqan ay la qabsadaan kuna keenin wax casbi ah oo buuran .
Magaalada Boorama iyo guud ahaan gobolkaasi oo inta badan roobabku siweyn u maasheeyaan kuna caana barwaaqo iyo rays ayaa hadana dadka magaaladu kuu sheegayaan in marka uu dhul gariirkaasi dhaco kadibna ay dareemaan roobab joogto ah oo magaalada ka da’a.
Magaaladan oo ay ku hareeraysan yihiin Buuro waa weyn oo qaarkood siweyn loogu hal qabsaday suugaanta Somalida ayaan ilaa hadda lagu sameyn cilmi baadhis balaadhan oo lagu baadhayo dhul gariirkaasi iyo inuu la xidhiidho Buurahan magaalada ku hareeraysan .
Previous articleFatahaada webiga Dawa iyo roobab mahiigaan oo khasaare Gaadhsiiyey Dawlad degan Somalida
Golaha wakiilada somaliland oo mooshinka ka keenay isgaadhsiinta
Daawo: Sacuudiga oo joojiyey Xoolo laga helay Xanuuno iyo laba...